နှစ်စဉ်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း၏သန်းတန်ဖိုးရှိ 50 မှ Kayseri 21 - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriKayseri ၏ပြဿနာမှနှစ်ပတ်လည် 50 21 သန်း TL ဖြေရှင်းချက်
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
သန်း Tllik နှစ်စဉ် Kayseri cozum ၏ပြဿနာ
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mamdouh Büyükkılıç'ın, Tala ကနေစတင် Hulusi ပုသွင်းဒုတိယမြို့ထဲတွင်ပြီးစီးခဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အဓိကစုဆောင်းလိုင်းမှတစ်ဆင့်ဘဂ္ဂဒက်လမ်းအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်သည်အထိဆက်လက်ထားတဲ့ 11 ကီလိုမီတာရှည် Boulevard အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်နှစ်ကုန်ကျစရိတ်အခြေခံအဆောက်အအုံပြဿနာတွေနှုန်းမြို့အ 50 21 သန်း၏အနာဂတ်ဖယ်ရှားရာနိုငျငံတျောသမ်မBüyükkılıç, run ဖို့အကျိုးရှိသောဖြစ်စေလိုကြောင်း။
Büyükkılıçသမ္မတ, KAS Assoc မှ General Manager ။ ဒေါက်တာ Ozgur Ozdemir နှင့်စုဆောင်းလိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့အပြီးစီးအခြားအရာရှိများတစ်ဦးအနေဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး Arif လမ်းအသွားအလာမှပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
မနက်စောစော Al-Adha မတိုင်မီအသွားအလာသူတို့အနီးကပ်မြို့အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဆက်စပ်သောပျော်ရွှင်မှုကို၏ပြီးစီး၏အရေးကြီးသောအလုပ်တွင်နေထိုင်ကြောင်းဖော်ပြကြောင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်Büyükkılıçအဆိုပါလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့လုပ်သားများနှင့်ချိုမြိန်ရယူထားသောနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်လမ်းခင်းရန်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်လမ်းများ၏ညွှန်ကြားချက်အောက်တွင်လုပ် "ဟုအဆိုပါအရည် Boulevard မှတဆင့် Tala, Hulusi ထံမှဘဂ္ဂဒက်လမ်းသည်အထိစတင် 21 သန်းမှဦးဆောင်သည်ဤလမ်း၏ကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Kayseri ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားလျှော့ချဘယ်အရာကိုတက်အစေခံလျှင်, '' ဟု၎င်းကပြောသည်။
ရှေ့ဆက်မနက်စောစော Al-Fitr 18 ၏လမ်း။ Büyükkılıçနိုင်ငံတော်သမ္မတသူတို့လမ်းပေါ်မှာခြမ်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းသတိပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ပေးနိုင်အောင်, "Arif လမ်းအတွက်အနစ်နာခံ၏ပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းရလဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိပြီ။ ငါလမ်းအကျင့်ကိုကျင့်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကိုကူညီသောသူအပေါင်းတို့သည်နိုင်ငံသားများ၏ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းဤနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းမှလှူဒါန်းခဲ့သောသူတို့အားကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အားလပ်ရက်ရှေ့တော်၌ထိုဝန်ဆောင်မှုတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လူတိုင်းပိုကောင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ကေဘယ်လ်ကားအသွားအလာပြဿနာအဖြေတစ်ခုဖြစ်ရပြီလို 22 / 10 / 2013 အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ကေဘယ်လ်ကြိုးကားအသွားအလာပြဿနာအဖြေတစ်ခုဖြစ်ရပြီလို: အသွားအလာ7အဆိုပြုချက်ကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်အစ္စတန်ဘူလ်ဆန့်ကျင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်အံ့သောငှါ။ အတွင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့သူတွေကိုရှိပါတယ်။ သစ်လမ်းအခြေအနေမြို့ပြ၏အထူးကုပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အသွားအလာ Recep Bozlağanနေ့စဉျတိုးပွားလာသည်ကိုသူအသစ်ကလမ်းတည်ဆောက်ခဲ့သင့်သည်ဟုဆိုသည်။ သူ၏စကားBozlağanဆက်လက်: "ကြောင့်စုစုပေါင်းအမျိုးသားထုတ်ကုန်၏သုံးခြံတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အပြိုင်ခုနှစ်, မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစ္စတန်ဘူလ်၌နှစျဆတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤခြွင်းချက်အသွားအလာကြီးထွားစေရန်မြို့သို့ရောက်ကြ၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုမြို့အတွက်အကောင့်အသွားအလာအသံအတိုးအကျယ်သို့ယူတဲ့အခါမှာသူကထိပ်အဆင့်အထိသွား၏။ ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရှေ့၌ငါတို့လက်ကိုတင်ကြကုန်အံ့, အစ္စတန်ဘူလ်၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် ...
LRT ၏ Salihli အသွားအလာပြဿနာဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည် 05 / 02 / 2013 ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာအဖြေတစ်ခုအဖြစ် LRT အလင်းရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုအဆိုပြုချက်ကို၏ Salihli Salihli စနစ်အသွားအလာပြဿနာအဖြေတစ်ခုတက်သို့ဆောငျခဲ့ကွရလိမ့်မည်။ အဆိုပါစည်ပင်သာယာညီလာခံ၏အစည်းအဝေးနှင့်ပါလီမန်၏ MHP အဖွဲ့ဝင်အုပ်စုကပေးတဲ့အလင်းရထားလမ်းအဆိုပြုချက်ကိုတှငျဆှေးနှေး additional အစီအစဉ်ပစ္စည်းများ, ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကောင်စီအစည်းအဝေး၏အစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ Salihli မြို့တော်ဝန် Mustafa Uğurအိုကေ, သူတို့အသွားအလာပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမာစတာအစီအစဉ်အဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ အလင်းကိုရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူလွှတ်တော်တွင်ပြီးခဲ့သည့်ပါလီမန်အဖွဲ့သုံးပါတီအစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်ကပြန်မြို့ကောင်စီအစီအစဉ်အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုရောက်စေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်အဆိုပြုချက်ကို၏မြူနီစီပယ်ယူနစ်များ၏အပြုသဘောဆောင်အကဲဖြတ်ကြည့်ရှု။ source: ငါ www.sondakika.co ...
3 ။ ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာများတံတားမှဖြေရှင်းချက် Completed M ကစစ်တမ်းဖွစျသှား 19 / 10 / 2013 အဆိုပါ Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကောလိပ်အတွက်တူရကီရဲ့ '' ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး '' ရေးရာပထမဦးဆုံးအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း '' ကအသွားအလာပြဿနာများတတိယတံတားမှအဖြေတစ်ခုလား? ': ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာများတံတားမှဖြေရှင်းချက် M ကစစ်တမ်းကကောက်ချက်ချဖွစျသှား ဒါဟာအဆက်အသွယ်သူ့ရှာပုံတော်ခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ၏ 68 ရာခိုင်နှုန်းကို "ဟုအဆိုပါယာဉ်ကြောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းတတိယတံတားဖြစ်မည်လား?" ဟုသူက "Yes" ကိုအဖြေ xnumx ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြေကြားခြင်း, "မဟုတ်ပါ" နေချိန်မှာသူကပြောသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Applications ကို၏ Beykoz ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသက်မွေးမှုကျောင်းနှင့်သုတေသနစင်တာကိုအသုံးပြုပုံနှင့်ပါမောက္ခ Bulent TANLA ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ဒေါက်တာ အဆိုပါညု၏ Okan ညှိနှိုင်းရေးမှူး '' ကအသွားအလာပြဿနာများတတိယတံတားမှအဖြေတစ်ခုလား? '' အမြင်စစ်တမ်းများဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအစ္စတန်ဘူလ်၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာနှင့်အတူသြဂုတ်လအတွင်း 32 26 စက်တင်ဘာလ3နေ့စွဲ ...
Mersin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာအဖြေတစ်ခုရှာဖွေ 11 / 09 / 2014 ဖြေရှင်းချက်ရှာနေ Mersin Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကို၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအဖြေတစ်ခုရှာဖွေနေသည်။ အတူတူဖွဲ့စည်းအတူ Mersin တက္ကသိုလ် (Mei) 'သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဆိုပါလမ်းရထားမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှသတင်းပို့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်, အလင်းရထားလမ်းစနစ်ကဒါမှမဟုတ်တစ်လိုင်းပြေးရထား၏အရာ Mersin ပိုမိုသင့်လျော်ဖြစ်စစ်ကြောစီရင်ရလိမ့်မည်။ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မြို့ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများ, ဖြေရှင်းချက်ရှာဖွေနေ။ အတူတူဖွဲ့စည်းအတူ Mersin တက္ကသိုလ် (Mei) 'သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအဆိုပါလမ်းရထားမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှသတင်းပို့ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်အညီပြင်ဆင်ပါလိမ့်မည်, အလင်းရထားလမ်းစနစ်ကဒါမှမဟုတ်တစ်လိုင်းပြေးရထား၏အရာ Mersin ပိုမိုသင့်လျော်ဖြစ်စစ်ကြောစီရင်ရလိမ့်မည်။ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် Mersin တက္ကသိုလ်ပူးတွဲ ...
အဆိုပါရထားလမ်းပိတ် AK ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်း 17 / 10 / 2015 တံခါးပိတ်ရထားလမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း AK ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း Mehmet Erdem Aydin ပထမနေရာများ၏ပြဿနာ AK ပါတီဖြေရှင်းချက်ရွေးချယ်ခြင်း၏အလုပ်၏အတိုင်းအတာအဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် Germencik အပေါင်းအဖေါ်များသွားရောက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားတွေအန္တရာယ်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုရထားလမ်း TCDD အားဖြင့်သံအရက်ဆိုင်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းဧရိယာ၏ပြန်ဖွင့်များ၏မေတ္တာရပ်ခံချက် TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူဖုန်းဖြင့်စကားပြောခဲ့သည်။ အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှု Erdem, ထိုပိတ်ထားသောအပိုင်းအားဖြင့်ဖြတ်သံဖြတ်တောက်ခြင်းမှေးညှပျ၏အကူးအပြောင်းကိုဦးဆောင်။ Atatürk Caddesi ဒေါက်တာနှင့်အတူတံခါးဝ၌တည်ရှိသောအပေါင်းအဖေါ်များရပ်ကွက်မီးရထားဘူတာ, အန္တရာယ် TCDD အားဖြင့်သံဘားနှင့်အတူအပိတ်ခံခဲ့ရသောမြေပေါ်တွင် Mahirbey ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလဆက်သွယ်သောလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ စိုးရိမျညနေပိုင်းတွင်အတွက်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြတ်သန်းနေဖန်ဆင်းတော် ...
အဆိုပါယာဉ်ရပ်နားပြဿနာ Antalya စက်မှုဖြေရှင်းချက် 13 / 09 / 2017 Antalya အသက်တာကိုပထမဦးဆုံးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ကားပါကင်သုံးစွဲ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ အဆိုပါဟောငျးစီးတီးန်းကျင်စက်မှုထပ်ကားပါကင်နှင့် Ataturk ရိပ်သာလမ်းယာဉ်ရပ်နားလိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်ယာဉ်စွမ်းရည်များထူထောင်ဧရိယာဆန့်ကျင်ဘက်ပလာဇာ 2000 188 စည်ပင်သာယာအဆောက်အဦး။ Antalya ရဲ့သမိုင်းဝင်ဟောငျးစီးတီးမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့် Ataturk ရိပ်သာလမ်းတစ်ရှူးအဆိုပါစက်မှုထပ်ကားပါကင်စီမံကိန်းကပတ်ပတ်လည်ကားရပ်နား၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သောမြို့တော်မြူနီစီပယ်, ပလာဇာ 2000 အဆောက်အဦထဲကနေဖြတ်ပြီး Hasim Iscan ရပ်ကွက်အတွင်းယခင်ကစက်မှုခေတ်သစ်ထပ်ကားပါကင် ANET 188 ကားတစ်စီးပန်းခြံအားဖြင့်သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသည် converting, မြှို့နယ်ပိုင်ပြင်ပတွင်ယာဉ်ရပ်နားဧရိယာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်။ အဆင်ပြေကားပါကင်ကိုရှာဖွေလွယ်ကူစေသည်နည်းပညာနှင့်အလုပ်လုပ်, အချိန် ...
အဆိုပါသေးငယ်တဲ့ကပ္ပတိန်မှအဖြေတစ်ခုခြင်းမရှိဘဲအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အသွားအလာပြဿနာ 24 / 04 / 2014 အဆိုပါသေးငယ်တဲ့ကပ္ပတိန်မှအဖြေတစ်ခုခြင်းမရှိဘဲအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အသွားအလာပြဿနာ: အကဏ္ဍ၏ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီသင်္ဘောİstanbullines, 23 ဧပြီလအမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ကလေးရဲ့နေ့အတွက်နည်းနည်းဧည့်သည်များနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကူးတို့ Eskihisar အမြောက်တပ်အဆိုပါအပျော်စီးလိုင်းရဲ့အပွညျ့အဝသေးငယ်သောလွှတ်ပျော်မွေ့သည့်İstanbullines၏ပွဲ, ထိုပျော်စရာအချိန်လေးထဲကတစ်ခုကနေရောင်စုံလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ Eskihisar-Tavşanlıလိုင်းနှင့်ဝေးထောငျကျြောİstanbullinesနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်များတင်ဆောင်သည့် 2013 သန်းခရီးသည်အထက်တွင်ဇူလိုင်လ 250 1,5 အချိန်ပေးဖို့နှစျတှငျစတငျခဲ့နည်းနည်းဧည့်သည်များ 23 ဧပြီလအမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာနှင့်ကလေးရဲ့နေ့နှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူငယ်များကလေးများနေ့, ဖယ်ရှားခြင်းတစ်ဦးအဆင်ပြေခရီးသွားဖြတ်သန်းနှင့်ပှဲ Dragos ပျော်မွေ့ခြင်းအားဖြင့်ပင်လယ်ခရီးကိုခံစား ...
လေ့လာဖို့စတင်ခဲ့ပြီကားရပ်ရန်ပြဿနာများမှဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ဖို့ Karaman 05 / 05 / 2019 Karaman မြူနီစီပယ်, Anafartalar အလယ်တန်းကျောင်းတမြို့လုံးအတွက်ယာဉ်ရပ်နားပြဿနာယာယီဖြေရှင်းချက်ရှိရာယာဉ်ရပ်နားစာရေးဧရိယာလှည့်အဖြစ်။ အဟောင်းကို Anzac အလယျပိုငျးကျောင်းတိုးမြှင့်ဒေသခံအသွားအလာနှင့်ယာဉ်ရပ်နားရှားပါးမှုမှဖြိုဖျက်ခဲ့သည့် Karaman မြို့တော်ဝန်Kalaycıစစ်ပွဲ, ထိုယာဉ်ရပ်နားဧရိယာမှdüzenletတည်နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Kalaycıသမ္မတ, သွန်သင်ပေးခဲ့တယ်စီမံကိန်းစီးတီး Square ကို Anzac ကျောင်းအတိုင်းအတာပြိုကျ, သိပ္ပံနဲ့ရေးရာ၏ညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်အစပျိုးအလုပ်နှင့်အတူစီစဉ်ပေးသည့်ကားရပ်နားအများကြီးစက်တွေသို့လှည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကသမ္မတကားပါကင်ပြဿနာများ, သူတို့ကယာဉ်ရပ်နားပြဿနာတစ်ခုအမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်ရှာအကောင်အထည်ဖော်နေသောစီမံကိန်းများအမျိုးမျိုး၏ပြီးပြည့်စုံဖျက်သိမ်းရေးအဘို့, အသွားအလာစီးဆင်းမှုKalaycıတစ်နည်းနည်းအနားယူဒီအစီအစဉ်နှင့်ဖွဲ့ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကတ္တရာသုံးလေလံ၏ 30 သန်းတန်ဖိုးရှိ 14 / 05 / 2019 ကတ္တရာကိုနူးညံ့၏ကုန်ကျစရိတ် 30 သန်းကိုတွေ့အကြောင်းကို Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နုကမ်းလှမ်းချက်ကိုပါဝင်လေးကုမ္ပဏီများမှ။ မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောရပ်ကွက်နှင့်ခရိုင်၌ပြစ်မှားမိပူကတ္တရာအလုပျအတှကျတင်ဒါခဲ့ကြသည်။ ကုန်ကျစရိတ် 29 အကြောင်းကိုဖန်ဆင်းတင်ဒါ၏ 9094တထောင်သန်းတန်ဖိုးရှိကုမ္ပဏီပူးပေါင်းခဲ့သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတင်ဒါကုမ္ပဏီများနှင့်လေလံပါဝင်ခဲ့ကြသည်: Nalbantoğluဆောက်လုပ်ရေး: 23 သန်း 486 တထောင်İstaşဖွဲ့စည်းပုံ: 26 သန်း 186 တထောင် Aydin ဆောက်လုပ်ရေး: 29 သန်း 881 တထောင်Öztaşဆောက်လုပ်ရေး: 32 သန်း 584 တထောင်နူးညံ့သောထိုအဆိုပြုချက်၏စာမေးပွဲအပြီးကောက်ချက်ချပါလိမ့်မယ်။
'' စမတ် '' ဖြေရှင်းချက်၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအိပ်မက်ဆိုး 24 / 04 / 2013 လေ့လာမှုအားလုံးအချက်ပြလက္ခဏာဖွဲ့စည်းရေးအဘို့အအသိဉာဏ်နိမိတ်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အစပျိုးခဲ့သည်çözüm.trafik '' မတ် '' ၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအိပ်မက်ဆိုး။ စီမံကိန်းကွန်ပျူတာမှတစ်ဆင့်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များ bulunacak.istanbul အသိဉာဏ်မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအမျိုးမျိုးအတွက်ဘဝမှကြွလာလျှင်, ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယမြို့ဖြစ်ပါသည်, အစိုးရကအသုံးချခဲ့သည်။ တူရကီအတွက်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးလမ်းအပေါင်းတို့လေ့လာမှုမှာသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အသိဉာဏ်အသွားအလာအချက်ပြဆိုင်းဘုတ်များ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အစပျိုးခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီများနှင့်လမ်း, ရထားလမ်း, လေနှင့်ပင်လယ်နှင့်အတူထိတွေ့အဝေးပြေး၏တူရကီအထွေထွေညွှန်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအရင်းအမြစ်မှစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲရန်အစိုးရကို၏တံခါးကိုလာခေါက်တယ်။ ဒါဟာစနစ်သစ်နှင့်အတူစည်လမ်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ဗဟိုတွင်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မည် ...
Hulusi သူဟာအာကာ Boulevard
အထူးနယူးယာဉ်အသွားအလာစောင်ရေ Plan ကိုအရှေ့ Barracks Market ကဧရိယာ
LRT ၏ Salihli အသွားအလာပြဿနာဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်
3 ။ ယာဉ်အသွားအလာပြဿနာများတံတားမှဖြေရှင်းချက် Completed M ကစစ်တမ်းဖွစျသှား
အဆိုပါရထားလမ်းပိတ် AK ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်း
အဆိုပါယာဉ်ရပ်နားပြဿနာ Antalya စက်မှုဖြေရှင်းချက်
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကတ္တရာသုံးလေလံ၏ 30 သန်းတန်ဖိုးရှိ
'' စမတ် '' ဖြေရှင်းချက်၏ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအိပ်မက်ဆိုး